10 Meelaha ugu Wanaagsan ee leh Goobaha Tennis -ka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Meelaha ugu Wanaagsan ee leh Goobaha Tennis -ka
Dusha sare ee waddooyinka caanka ah ee Paris, ama ku dhex jira buuraha Scottish ama Alps, kuwani waa goobaha fasaxa ee la rabo Yurub. Waxaa intaa dheer, kuwan 10 Meelaha ugu sarreeya ee leh garoonnada tennis -ka ayaa kugu dhiirrigelin doona neecawda ugu horraysa iyo ciyaartaada ilaa heer cusub. Solo ama lammaanaha, waxaad jeclaan doontaa meelahaan cajiibka ah iyo garoonnadooda tennis -ka.
1. Meesha ugu Wanaagsan ee Faransiiska oo leh Goob Tennis Weyn: Mouratoglou Tennis Academy
Riviera Faransiis waa mid ka mid ah meelaha fasaxa ugu sarreeya ee Faransiiska, iska daa Yurub. Aragtida buurta Alpine, harooyinka buluugga ah, iyo xeebaha bacaadka ah, dhawr talaabo uun buu u jiraa garoonka teniska Mouratoglou. Indho -indheynta Badda Ionian, garoonkan tennis-ka ee ugu casrisan waa meel cajiib ah oo aad ku tababarato qaar ka mid ah macallimiinta tennis-ka ugu sarreeya Yurub.
Akadeemiyadda Tennis -ka Mouratoglou waxay soo dhaweynaysaa dhammaan noocyada ciyaartoy ee heerar kasta. Maxkamadaha tennis -ka ee Mouratoglou ayaa furan maalin walba. Intaad joogtid hoteelka & miciinka, waxaad ballansan kartaa maxkamad saacad ah maalintii. Maxkamadda tennis-ka ee la yaabka leh ee Mouratoglou ayaa qayb ka ah kuwa dunida caanka ka ah Akadeemiyadda Mouratoglou oo lahaa qaar ka mid ah ciyaartoydii tennis -ka ugu fiicnaa adduunka oo halkan ku tababbaray oo sii wata hudheelka hudheelka ama xeebta nasashada iyo nasashada.
2. Goobta Fasaxa ee Cajiibka ah ee Talyaaniga oo leh Maxkamadda Tennis -ka: San Pietro Di Positano
Maxkamaddan tennis -ka weyn waxay gaar u tahay martida hudheelka Il San Pietro. Maxkamadda teniska ee Positano 5-star waxay bixisaa Badda Mediterranean-ka iyo Xeebta quruxda badan ee Amalfi. Maxkamadda tennis -ka San Pietro waxay ku taal Positano, mid ka mid ah 10 meelaha ugu quruxda badan ee lagu booqdo Xeebta Amalfi, iyo Talyaaniga dabcan.
U safrida Amalfi waa riyada qof walba. Xeebta, ah tuulooyin qurux badan, nolosha badda, iyo aragtida kaadhka boostada oo lagu ammaanay sababo dibadeed oo weyn oo loogu talagalay isboortiga iyo teniska, qofna ma weydiisan karaa wax intaas ka badan? Haddii aad ka daasho ku celcelinta ciyaartaada, waxaad aadi kartaa xeebta qallafsan, ama aad tagto si gaar ah doon kortaan oo ay weheliso Positano cajiib ah.
3. Twaa garoonka Tennis -ka ugu Fiican England: Headland, Cornwall
Godadka dhagaxa ah, xeebaha bacaadka ah, badweynta Atlantic ee buluugga ah, iyo aqalada ingiriiska ee kuyaala dhulka cagaaran, Cornwall waa mid ka mid ah meelaha fasaxa ugu quruxda badan ee England. Jasiiradda cajiibka ah waxay ku habboon tahay nasashada xeebta, oo weyn hawlaha bannaanka, sida teniska ama isboortiga biyaha.
Gudaha Cornwall, waxaad ka dooran kartaa 4 maxkamadaha teniska si ay u ciyaaraan ciyaar aad u wanaagsan. Tusaale ahaan, Naadiga Tennis -ka Penzance wuxuu u furan yahay dhammaan booqdayaasha iyo ciyaartooyda heerarka kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda tennis -ka ugu fiican waxay ku taal Hoteelka Headland ee Newquay. Indho -indhaynta Xeebta Fistral iyo Badweynta Atlantic, Headland waa huteel raaxo leh, oo leh tas -hiilaad dibadeed oo aad u fiican si aad ugu sii firfircoonaato fasaxaaga xeebta Ingiriiska ee cajiibka ah.
4. Meesha Fasaxa Tennis -ka Sare ee Switzerland: Qasriga Gstaad
Dad badan oo dalxiisayaal ah ayaa laga yaabaa inay magaalada Gstaad u yaqaanaan dhul la yaab leh, laakiin sidoo kale waa sheekooyin xagaaga ah. The Swiss Alps waa cajiib guga, oo leh xaalado cimilo oo aad u weyn oo loogu talagalay socodka, baaskiil, iyo ciyaar tennis ah. Gstaad waa meel la yaab leh oo loogu talagalay fasaxa firfircoon ee Switzerland, oo leh aragtiyo xamaasad leh iyo hawo cusub oo alpine ah oo dabiici ah oo kor u qaadi doonta heerarka tamartaada.
Sida kor ku xusan, Gstaad waa meesha ugu sarraysa ee loogu talagalay fasaxa teniska ee Alps -ka Switzerland. Laga soo bilaabo maxkamadaha tennis-ka ee 5-ta ah ee huteelka loo dalxiis tago ee Gstaad Palace ilaa Swiss Open J. Garoonka tennis ee Safra Sarasin, iyo xarunta isboortiga naadiga Gstaad, doorashada adigaa iska leh, Aragtida Alpine waxay ku sugi doontaa maxkamad kasta si ay ula dhaqanto dhaq -dhaqaaqaaga qaar ka mid ah ciyaartoydii tennis -ka ugu fiicnaa adduunka.
5. Ku ciyaar Tennis Lake Geneva, Switzerland
Deggan, cagaar iyo buluug, qurux dabiici ah oo cajiib ah, Lake Geneva waa goob fasax sixir ah. Muuqaalka Alpine ee asalka ah ayaa soo jiita booqdayaasha sannadka oo dhan, usbuuca barafka weyn, ama nasashada fasaxa guga. halkan, waxaad ka dooran kartaa inaad ku lugayso seeraha Alpine ama ku nasato harada, laga bilaabo firfircoonaanta ama qabowga, labada jid, doorashadaada waxay kaa dhigi doontaa inaad dareento caafimaad iyo tamar.
Maadaama Lake Geneva ay tahay meesha ugu habboon ee loogu talagalay madadaalada dibadda, maxkamadaha tennis -ka ee halkan waxay ku daraan soo jiidashada waxayna soo jiitaan ciyaartooyda tennis -ka adduunka oo dhan. Huteelada iyo meelaha dalxiiska ee halkan ku yaal waxay bixiyaan maxkamadaha tennis -ka ee cajiibka ah, iyo kuwa wekeders waxay sidoo kale ku raaxeysan karaan hal ama lammaane’ ciyaar ka mid ah naadiyada tennis -ka ee Lake Geneva. Dahabkaan Swiss -ka ah wuxuu soo dhaweynayaa ciyaartoy kasta heer kasta iyo miisaaniyad kasta.
Lyon ilaa Geneva Tareenka
Zurich ilaa Geneva Tareen
Paris ilaa Geneva Tareenka
Bern ilaa Geneva Tareenka
6. Meelaha ugu Wanaagsan ee leh Goobaha Tennis -ka: Fasaxa Tennis -ka ee Paris
Wax yar miyaadan ogeyn in caasimadaha xiisaha iyo jaceylka adduunka leh ay leeyihiin maxkamadaha tennis-ka ugu wanaagsan ee Yurub. Mid ka mid ah dhibcahan ayaa ku qarsoon xaafadda 12aad, Paris’ naadiga teniska dhexe. Maadaama naadigu ku qarsoon yahay waddo duug ah oo Paris ah, garoonkan tennis -ka casriga ah wuxuu isu beddelay barxadda tennis -ka weyn oo deggan. Haddii ay kugu adag tahay inaad rumaysato kaalay adigu arag, maadaama naadigan tennis -ka qof walba u furan yahay.
Maadaama qof walba ku riyoodo inuu yimaado Paris, qaar badanina waxay fuliyaan riyadooda cimriga dheer ee ah inay u safraan Paris ama u guuraan si joogto ah, magaaladu aad bay u dad badan tahay. Sidaa darteed maahan wax la yaab leh in qaar ka mid ah xarumaha ugu caansan Paris ay u kacaan saqafka sare. Tani sidoo kale waa kiiska maxkamadaha teniska, halka dalal badan kuwani yihiin beero dibadeed, in Paris, waxaad ku dhaqmi kartaa dhaqdhaqaaqyadaada meesha ugu sareysa tareenka, on Atlantic Garden, oo leh aragtiyo Dalxiis Montparnasse.
7. Ku ciyaar Tennis -ka Pikes Hotel Ibiza
Jasiiradda Isbaanishku waxay caan ku tahay mahadnaqyada xafladaha cajiibka ah, hoteelada raaxada, iyo xeebaha. Waxaad la yaabi doontaa inaad ogaato in Ibiza ay leedahay qaar ka mid ah aragtida ugu xiisaha badan ee Spain. Jasiiradda dhagaxa ah, xeebaha dahabka ah, iyo badda qaaliga ah waxay abuuraan sawir qof walba hilmaamsiiya qoob ka ciyaarka habeenkii oo dhan. halkii, waxay la soo baxaan qorraxda, si loogu soo dhaweeyo maalin kale oo weyn Ibiza.
Waxaa intaa dheer, bannaanka weyn ee jasiiradda Isbaanishka ayaa ka dhigaysa jasiiradda meel ku habboon fasax firfircoon. Hoteeladu waxay bixiyaan tas -hiilaad isboorti oo weyn, sida maxkamadaha teniska ee cajiibka ah. Mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee ciyaarta teniska solo waa maxkamadda casaanka ee Pikes Hotel. Maxkamaddan tennis -ka ee xiisaha leh waxay indhaha ku haysaa badda oo leh buuro cagaaran oo ku wareegsan iyo samada buluugga ah ee kore. Ku habboon kali, ama labanlaaban, haddii aad tahay qof xiiseeya tennis -ka, markaa Pikes ee Ibiza waa lama huraan.
8. Tenuta Delle Ripalte Jasiiradda Elba, Tuscany
Goobo fasax oo aad u yar oo ku yaal Jasiiradda Elba ma laha maxkamad tennis. Jasiiradda Elba ee Tuscany waxay ku taal badda, dariiqyada beerta canabka ah iyo filooyinka Talyaaniga, laakiin sida riyada. Jasiiradda Elba waa mid ka mid ah meelaha ugu dabeysha badan Yurub, waxaadna ogolaan doontaa markaad hoos gasho iyo xitaa ka hor, halka uu ku bogaadinayo jasiiradaha ugu waaweyn Talyaaniga.
Sidaa darteed, Jasiiradda Elba waa meel aad u qurux badan oo fasax lagu tago. Ku darida madadaalada xeebta, waxaad ku ciyaari kartaa keligaa ama waxaad ku iftiimin kartaa faa'iidada lammaanahaaga awoodda mid ka mid ah meelaha lagu nasto ee ugu sarreeya’ maxkamadaha teniska. Sida kor ku xusan, hoy kasta oo fasax ah oo ku yaal Elba wuxuu bixiyaa maxkamadaha tennis -ka ee gaarka loo leeyahay, barkadaha dabaasha, ama xeebaha gaarka loo leeyahay. Markaad ka booddo maxkamadda ilaa badda hal tallaabo, waxaad ku nooshahay nolol wanaagsan, Hubaal.
9. Meelaha ugu Wanaagsan ee leh Goobaha Tennis -ka: Fasaxa Tenniska ee Scotland
Qalcado, aqallada, Dabeecadda Scottish -ka ee buuraha iyo meelaha sare, u safrida Scotland waxay ku noqonaysaa wakhtiyadii Knights iyo legends. Halka aqallada cawska ah iyo qalcadaha waaweyn aan la taaban karin waqtiga gudahiisa, cagaarka weyn ee bannaanka ayaa si buuxda u qaabilaya dadka socotada ah maanta. Laga soo bilaabo barkadaha dabaasha ilaa beeraha teniska, Faahfaahin kasta waxaa loogu talagalay inay siiso booqdayaasha dhammaan waxay u baahan yihiin meel ka baxsan guriga.
Sidaas, haddii aad jeceshahay ciyaar tennis, ama kor u qaadida aragtiyada miyiga ee quruxda badan, Scotland waa meel cajiib ah. Erayada si buuxda uma gudbin doonaan waayo -aragnimada fasaxa Scotland ilaa aad ka aragto quruxda naftaada. Markaad ku jirto quruxda dabiiciga ah, waxaad qiimeyn doontaa daqiiqad kasta oo madadaalo iyo nasasho dibadeed ah.
10. Fasaxa Tennis -ka Salzkammergut Austria
Waxaad ku qori kartaa gabayada agagaarka harada, daawashada qorrax dhaca, oo leh Strudel. Dhanka kale, waxaad qaadan kartaa tareenka buurta Schafberg ilaa harada sharafta leh ee Wolfgang ee Salzburg. Gobolka harada Salzburg aad buu u qurux badan yahay waana meel fasax weyn u leh dabeecadda. Aragtida harada, Dhulka daaqa ee Alpine, socodka socodka xajka ee u dhexeeya St Gilgen iyo St Wolfgang waa siyaabo aad u fiican oo dib loogu soo nooleeyo awoodaada.
In kasta oo booqdayaasha intooda badani ay u yimaadaan Wolfgang Lake si ay u nastaan, dhab ahaantii waa goob fasax firfircoon oo cajiib ah. Marka laga reebo socodka weyn, waad samayn kartaa, gobolka Austria wuxuu la yaab ku yahay dadka jecel tennis -ka. Huteelada ku yaal Salzkammergut waxay leeyihiin maxkamadaha teniska ee cajiibka leh oo leh alpine iyo views harooyinka. Sidaas, haddii riyadaada nolosha dheer tahay fasaxa teniska ee Austria, Salzkammergut waa meesha ugu fiican.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta fasax firfircoon oo weyn. Kuwani 10 meelaha ugu sarreeya waxay leeyihiin aragtiyo aad u wanaagsan iyo garoonno tennis oo cajiib ah. Sidaas, waxaad ku tababaran kartaa ciyaartaada kali ama ciyaar ka dhan ah saaxiibbadaada, abuuraya xusuus xiiso leh fasaxaaga quruxda badan.
Miyaad rabtaa inaad ku dhejiso dhejiskayaga baloogga “10 Goobood oo ugu Sareeya Goobaha Tennis -ka” bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fen%2Ftop-destinations-tennis-fields%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)